Ndụmọdụ njem maka US bụ ihe ihere mba ụwa: netwọ njem njem ụwa
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ mkpakọrịta » Ndụmọdụ njem maka US bụ ihe ihere mba ụwa: netwọ njem njem ụwa
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Mgbasa Ozi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a
COVID-19 agbanweela ụwa. Nke a kwesịkwara ịgụta ụzọ esi enye ịdọ aka na ntị njem. United States ga -abụrịrị naanị mba dị n'ụwa na -eji ịdọ aka na ntị eme njem. US ga -abụkwa naanị mba ụwa nke gụnyere ndị agbata obi nwere omume enyi na ọkwa kachasị elu nke ndepụta “anaghị eme njem”. Networklọ ọrụ njem nlegharị anya ụwa nke dabeere na Hawaii wepụtara nkwupụta ọnọdụ na-agba United States ume ka ọ rụgharịa ụzọ e si enye ịdọ aka na ntị njem.
Ndị gọọmentị na -enye ịdọ aka na ntị njem iji chebe ụmụ amaala ha pụọ ​​na mpụ, igbu ọchụ, na agha.
Ngalaba Ọchịchị nke United States na -enye ịdọ aka ná ntị njem maka ụmụ amaala US, ịdọ aka na ntị ndị a na -emetụta ndị njem n'otu n'otu, njem otu, njem ụgbọ mmiri na mgbakọ.
Ime ihe megidere ịdọ aka na ntị njem nwere ike ịnwe, maka ụlọ ọrụ njem, ahịrị njem ụgbọ mmiri, ma ọ bụ onye na -eme atụmatụ nzukọ, nsonaazụ akụ na ụba siri ike ma ọ bụ nke iwu.
The Network Tourism Network (WTN) taa wepụtara nkwupụta ọnọdụ iji gbaa ndị US State Department na US Center for Disease Control and Prevention (CDC) ume ịtụle ịgbanwe ụzọ ndụmọdụ njem maka ụmụ amaala US na -eme njem na "mba ọzọ" ugbu a na -ekwupụta.
Onye isi oche WTN Juergen Steinmetz kwuru, "COVID-19 agbanweela ihe niile." “Ọ bụ ihe a na -apụghị ikweta ekweta mgbe edepụtara mba dịka Bahamas ma ọ bụ Gris n'otu Afghanistan na North Korea. Nke a bụ ihe ihere na ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ ihe ọchị. ”
WTN ga -achọ ịhụ ọkwa ọkwa nnwere onwe 3 maka obodo ọ bụla edepụtara na ndepụta ndụmọdụ njem site na Ngalaba Steeti US ma ọ bụ CDC.
1. Ogo dabere na nchekwa yana okwu metụtara COVID.
2. Ogo dabere na ndị njem na-anaghị agba ọgwụ mgbochi COVID.
3. Ogo dabere na ndị njem ọgwụ mgbochi COVID.
Networklọ Ọrụ Njem Nleta Ụwa na -agba ume ka ehichapụ Guam, Puerto Rico, na Virgin Virgin Islands na ndepụta "mba ndị ọzọ."
Guam, Puerto Rico, na Virgin Virgin Islands bụ ókèala US ọ bụghị mba ọzọ. Ndị bi ebe ahụ bụ ụmụ amaala US. Ekwesịrị ịgwọ ha dịka steeti US ọ bụla. Maka gọọmentị United States iji ịdọ aka ná ntị njem Ọkwa 4 were ókèala US, ”Steinmetz kwukwara. "Achọpụtara m na ịkpa ókè a bụ enweghị nkwanye ùgwù nye ọtụtụ ndị ọrụ US nọ na Guam."
Usoro Ngalaba Ọchịchị nke United States na -amata ọkwa ndụmọdụ ndụmọdụ njem anọ:
Nlekọta anya nke ọma
Mgbatị ahụ mụbara ịkpachara anya
Ngalaba Steeti United States wepụtara ọkwa ndụmọdụ njem kacha elu megide mba ndị a, na -agwa ụmụ amaala US: ANAGHỊ EME njem gaa mba ndị edepụtara:
Israel West Bank na Gaza
Ụlọ Ọrụ Na -ahụ Maka Nchịkwa Ọrịa nke United States nyere ịdọ aka na ntị njem ya kachasị elu megide mba "mba ọzọ" ndị a, na -asị:
Jersey (akụkụ UK)
A na -enye ịdọ aka na ntị njem site na nke kachasi ike - 1 ruo nke siri ike - 4. Ntụle 4 pụtara nnukwu ihe egwu, “agala.” Ugbu a, Ngalaba Steeti anaghị amata ọdịiche dị n'etiti okwu ahụike yana okwu agha na nchekwa.
Ọ na -ejikarị ụzọ mgbasa ozi gbasapụrụ agbachapụ agbachapụ agbachapụ agbachapụ, na -ese mba niile nwere otu akara na, ya mere, na -ebute nkwubi okwu ụgha
Ndụmọdụ Ngalaba Ọchịchị ugbu a na -ese ebe dị ka Afghanistan ma ọ bụ North Korea nwere otu ịdọ aka na ntị ugbu a maka mba gụnyere Bahamas ma ọ bụ Jamaica. Akụ na ụba Bahamas na Jamaica dabere nke ukwuu na ndị ọbịa US.
Na mgbakwunye, Network Tourism Network na -ahụ ndụmọdụ ndụmọdụ njem njem US nke dị ugbu a enyere megide Guam nke Territory US ihe ijuanya, ịkpa oke, na nduhie. "Ngalaba Steeti US na CDC enweghị ikike inye ndụmọdụ megide njem ma ọ bụ nye ndụmọdụ megide mpaghara ma ọ bụ steeti US ọzọ," Mary Rhodes, Onye isi oche nke Guam Hotel & Restaurant Association.
COVID chọrọ ụzọ ọhụrụ, ekwesịrị ịdọ aka na ntị njem dabere na mpụ na nchekwa, yana ịdọ aka na ntị nke abụọ maka COVID. Ịdọ aka na ntị ikpeazụ ndị a kwesịrị ịmata ọdịiche dị na ọgwụ mgbochi ọrịa site na ndị a na-anaghị agba ọgwụ mgbochi ma lelee nnweta nnwale ngwa ngwa na nyocha serological dị mfe iji nye ya mgbe ị banyere na ịpụ na mba.
Mbipụta nke ndụmọdụ ndụmọdụ njem sara mbara na enweghị ike ịmata na -eduga ọ bụghị naanị ọgba aghara akụ na ụba kamakwa iwetulata ịdọ aka na ntị njem, ịkpa oke, na nsogbu ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
WTN na -agba ndị Ngalaba Steeti US na erslọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa ka ha zụlite ụzọ dị mfe ma rụọ ọrụ iji mepụta mkpebi siri ike nke ndụmọdụ ndụmọdụ njem ya.
Onye isi oche WTN Dr. Peter Tarlow binyere aka na nkwupụta ọnọdụ WTN.
Effie Fletcher ekwu, sị:
September 9, 2021 na 05: 17
Kweere kpamkpam ma kelee gị!